Akụkọ - Gịnị Bụ Ọrụ nke Onye Na-ejide Ahụ?
Gịnị Bụ Ọrụ nke Onye Na-ejide Ahụ?
Onye na-ejide anụ ahụ kwesịrị ekwesị maka ụlọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ime ụlọ ịwụ ahụ, ụlọ mposi, ebe ọha na eze, ebe ntụrụndụ na ebe ndị ọzọ na ebe ọha.
Ihe nkedo nke ziri ezi bụ onye na-ejikarị anụ ahụ eme ihe. Onye na-ejide ihe na-eme ka a na-etinye ya na ebe dị iche iche na-enweghị mkpa itinye ya na mgbidi, nke na-eme ka ojiji nke ojiji ya dịkwuo elu.
N'otu oge ahụ, ọ dị mma na ngwa ngwa ịwụnye njide anụ ahụ. Ọ dị mfe ma dị ọcha.
Onye na-ejide ya na-ezere iji aka ya emerụọ anụ ahụ mgbe ọ na-esi nri ma ọ bụ na-arụ ọrụ ndị ọzọ, nke na-ewetara ndị mmadụ ịdị mma na ịdị ọcha.
Dogguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd. bụ ọkachamara na-emepụta na onye na-eme njem na mba ọzọ ọkachamara na nhazi na mmepụta nke ụdị egwuregwu dị iche iche na egwuregwu nko egwuregwu. ndị na-ejide ọla ọla wdg.
All nke anyị na-erube isi na mba quality standards.Our ọma kwadebere ụlọ ọrụ, ukwuu zụrụ azụ ọrụ na magburu onwe ya mma akara nile nkebi nke mmepụta-enyere anyị aka-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju.
Dika nsonaazụ nke ngwaahịa anyị dị elu na ọrụ ndị ahịa pụtara ìhè, anyị na ndị ahịa si mba 20 na-arụ ọrụ .Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ chọọ ị tụlee usoro omenala, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya na-akpụ ọma ahịa mmekọrịta na ahịa gburugburu ụwa.
Onye na - ejide ya bụ ihe na - akpachi anya. Ọ bụ ezie na onye na - ejide ya bụ ihe pere mpe, mana ọ metụtara ịchọ ezinụlọ mma. Ihe kachasị eji njide anụ ahụ eme bụ iji wetara ndị mmadụ nnukwu nkasi obi. Ugbu a, ọ bụghị naanị n'ụlọ, ọ bụ ebe ọha na eze na-anọ.
N'oge a, ihe njide anụ ahụ bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Yabụ, enwere ọtụtụ akara nke ndị na - ejide anụ ahụ n'ahịa, ị maara ọrụ a kapịrị ọnụ nke onye na - ejide ya?